Maraykanka oo sheegay in saacadihii la soo dhaafay Duqaymo dhinaca Cirka ah ka geysteen Soomaaliya | gobolada.com
Maraykanka oo sheegay in saacadihii la soo dhaafay Duqaymo dhinaca Cirka ah ka geysteen Soomaaliya
War Qoral ah oo ka soo baxay Taliska Howlgalka Mareykanka ee Qaarada Afrika ee loo yaqaano(Africom) ayaa waxaa lagu faah faahiyay duqeymo dhinaca Cirka ah oo saacadihii la soo dhaafay uu Mareykanka ka fuliyay dalka Soomaaliya.
Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in duqeymahaas ay ahaayeen kuwo ay ku taageerayaan dowladda Federaalka Soomaaliya,isla markaana ay ku difaacayaan Shacabka Soomaaliyeed sida hadalka loo dhigay.
“Annaga oo taageero siineyno dowladda Federaalka Soomalaiya kuna difaaceyno Shacbaka Soomaaliyeed,ayaa 27/11/2018 waxaan duqeyn dhinaca circa ah ka fulinay deegaanka Quy Cad,waxana beegsanay Saraakiil Shabaab ah oo aan ku dilnay Saddex Sarkaal ayaa lagu yiri War ka soo baxay Africom.
Warka ka soo baxay Africom ayaa waxaa sidoo kale lagu Fah faahiyay in howlgallada ay Soomaaliya ka fuliyeen saacadihii la soo dhaafay in aysan khasaaro ka soo gaarin dad rayid ah.
Ugu dambeyntii qoraalka ka soo baxay Hawlgalka Africom waxaa lagu yiri’ Mareykanka waa uu sii wadi doonaa duqeymaha uu la bartilmaameedsanayo Saraakiisha Al-Shabaab,Annaga oo taageereyso Ciidamada Dowladda iyo Saaxiibadeena Amisom.